စည်းမဲ့ကမ်းမဲ့ (၀မ်းဝေးနဲ့ မန္တလေး) | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » News » စည်းမဲ့ကမ်းမဲ့ (၀မ်းဝေးနဲ့ မန္တလေး)
စည်းမဲ့ကမ်းမဲ့ (၀မ်းဝေးနဲ့ မန္တလေး)
Posted by ကိုပေါက်(မန္တလေး) on Sep 21, 2011 in News, Photography | 15 comments
(20-9-2011)နေ့မနက် 11နာရီ လမ်း80ကနေ 29လမ်းအတိုင်းအနောက်ဆင်းလာတော့ အခုမြင်နေရတဲ့ကားက လမ်းပြောင်းပြန်ကြိးဝင်သွားပါတယ်။ တိုက်တိုက်ဆိုင်ဆိုင် 26ဘီလမ်းကျုံးလမ်းအတိုင်းအရှေ့ဘက်ကနေ အနောက်ဘက်ကိုလာတော့ 78လမ်းမီးပွိုင့်မှာ လမ်းစည်းကမ်းကိုလိုက်နာကြဘ…ို့ ဆော်သြနေပါတယ်။ အခုလို တိုက်အသစ်ဆောက်နေတာကို အင်္ဂတေလာပို့တဲ့ ကားလမ်းပြောင်းပြန်ဝင်တာကရော သင့်တော်ပါသလား။ ကားသမားကရော ဘယ်သူရဲ့ ခွင့်ြ့ပုချက်နဲ့ဝင်ပါသလဲ။ခွင့်ပြုချက်မရဘဲဝင်တယ်ဆိုရင် ရော စည်းကမ်းအတော်မဲ့တယ် လို့ပြောရင်ရင်ပါတယ်။
ဒီလိုလမ်းပြောင်းပြန်ဝင်လာပေမယ့် အဲဒီကားကို မောင်းလာသူရဲ့မျက်နှာပေးက လမ်းမှန်ကို ၀င်လာနေတဲ့အတိုင်း ခပ်တည်တည်။
ဒီလမ်းက တစ်လမ်းမောင်းပါ တောင်ကနေမြောက်ကိုဘဲသွားလို့ရတဲ့ 81လမ်းလေ
သူကတော့ ခပ်တည်တည် ကိုယ့်သဘောနဲ့ကိုယ်ဒီလိုလုပ်တာလား ခွင့်ပြုချက်ယူထားသလားတော့ သူတို့မှသိမှာပါ။
လူစည်ကားချိန်မှာ လမ်းပြောင်းပြန်ဝင်ပြိး ဇွတ်အတင်းမောင်းကြတာ။
အဲတော့ဒီလို လုပ်ချင်သလိုလုပ်နေတာက ဖြစ်သင့်ပါသလာ။
သိပ်မကွာတဲ့အချိန် လေးမှာရိုက်တာလေ အဝေးကလှမ်းရိုက်ထားတာပါ
အဲတော့ တကယ့်ိကိုစည်းမဲ့ကမ်းမဲ့ဖြစ်နေတဲ့ပုံလေးကို တင်ပေးလိုက်ပါတယ်။
ကောင်းအောင်ဝိုင်းဝန်းလို့ မူသစ်တွေနဲ့တည်ဆောက်နေတဲ့နိုင်ငံတော်အသစ်အတွက်အကောင်းမြင်စိတ်နဲ့စေတနာ စကားပါးရမယ် ဆိုရင် ဒီလိုစည်းမဲ့ကမ်းမဲ့ လုပ်ကိုင်နေတာကို သေသေချာချာတားဆီးသင့်တယ်လို့ထင်ပါတယ်။ အခုဆောက်နေတဲ့အိမ်ကိုရော ကားမောင်းလာသူကို ကျနော်ဘယ်သူမှန်းမသိပါဘူး။
မန်းလေးမှာဖြစ်နေတာက မော်တော် ပီကယ်က ဘယ်လောက်ဖမ်းဖမ်း ဖမ်းတုံးလေးခဏဘဲ။
လမ်းပြောင်းပြန်မှန်းသိသိကြီးနဲ့လဲ စီးတာဘဲ။ပြောင်းပြန်စီးသူက အရှိန်မရှော့ဘဲဇွတ်မောင်း မသေချင်သေးတဲ့ လမ်းမှန်စီးသူက ရှောင်ပေးနေရပါတယ်။
ဒါတွေက ပပျောက်သင့်ပါတယ်။ အခုပုံထဲကလို လမ်းပြောင်းပြန်ပေါ်မှာ ထင်တိုင်းကျဲတာမျိုးက နေရာတကာမှာပါ။
သတ်မှတ်ထားတဲ့စည်းကမ်းကို လူတိုင်းကတော့လေးစားလိုက်နာသင့်တယ်လို့ ထင်ပါတယ်။
ကဲဒီတော့ ဒီအဖြစ်အပျက်တွေကိုဘယ်သူတွေက ရပ်တန့်စေမှာလဲ။ တားဆီးမှာလဲ။
လေးပေါက် တောင်ဘက်မှာက ၇ဲစခန်း၇ှိတယ်လေဗျာ
သူတို.ခွင်.ပြုချက်နဲ. ၀င်နေတာလားမှ မသိတာ
၇ဲစခန်းေ၇ှ.က အမှိုက် ပုံကလဲ တော်တော် စည်းကမ်း၇ှိတယ်နော
ဟီး … လေးပေါက်ကြီး အဝေးကမို့လို့ ရိုက်တာ … အနီးကရိုက်လျှင် ပြေးပေါက်မှားမယ်နော်
သမီးလည်း ၀ါသနာပါလို့ အဝေးကရော အနီးကရော ရိုက်တာ … ပြေးပေါက်မှားခဲ့ဖူးတယ် …. တစ်သက်နဲ့တစ်ကိုယ် တစ်ခါတည်း ပြေးရတာ အသက်ထွက်မတတ်ပဲ
ိုစည်းကမ်း ရှိဖို.ကတော. တစ်ဦး တစ်ယောက်ချင်းမှာ တာဝန်ရှိတယ်လို့ထင်ပါတယ်။
သတ်မှတ်ထားတဲ့စည်းကမ်းကို လူတိုင်းကတော့လေးစားလိုက်နာသင်.တာတော. အမှန်ပါ။
ယခုလဲ သက်ဆိုင်ရာက လမ်းစည်းကမ်းကိုလိုက်နာကြဘို. ဒဏ်တပ် ပြီး တင်းတင်းကြပ်ကြပ် ဆောင်ရွက်နေ
ကြတာမို. မကြာမီစည်းကမ်းမဲ့သူတွေ ပပျောက်တော.မှာပါ။ အဲဒီ အခါ
ဦးပေါက် လည်း ဦးပေါက်ရဲ. ခေါင်းစဉ်ကို စည်းကမ်း ရှို တဲ.(၀မ်းဝေးနဲ့ မန္တလေး) လို.
ကျွန်တော်ကတော. ကိုယ်.မြို.နဲ.ပတ်သက်ပြီး အမြဲဂုဏ်ယူပါတယ်။ ဘာ.ကြောင်.လဲဆိုတော.
ကျွန်တော်က မန္တလေးကို ချစ်တဲ. မန္တလာသူ ဖြစ်နေလို.ပါဘဲ။
မန္တလေးကိုစေတနာထားတဲ. ဦးပေါက်(မန္တလေး)လည်း မန္တလေးအတွက် အမြဲဂုဏ်ယူနိုင်ပါစေ။
ဂုဏ် ဆို လို့ 
မြို့ ဂုဏ်ရောင် ရုပ်ရှင်ရုံ ကို သတိရမိတယ်
ကျွန်တော် တို့ ငယ်ငယ်တုန်းက အမြဲလို ကြည့်ခဲ့တဲ့ ရုပ်ရှင်ရုံ
ဟောင်းနွမ်း လျော့ ပါး ၊ ကြည့်တဲ့လူ အဝင်နည်းနေရှာပေါ့
ကိုပေါက်ရဲ့ တင်သမျှ ပုံတွေထဲမှာတော့ ဒီပုံကို အကြိုက်ဆုံးပါပဲ။ နိုင်ငံတိုးတက်ရေးအတွက် နိုင်ငံသားတစ်ဦး အနေနဲ့ တတ်နိုင်သလောက် တင်ပြပေးနိုင်တာကို ချီးကျူးပါတယ်ခင်ဗျာ။ ဖိုတိုအက်ဆေး ခေါ်မလား။ ဒီပုံတစ်ခုထဲမှာကို စည်းကမ်းလိုက်နာမှုနဲ့ ပတ်သက်လို့ တော်တော်များများ မြင်တွေ့နိုင်ပါတယ်။ လမ်းပြောင်းပြန် ရပ်ထားတဲ့ကား၊ လမ်းပြောင်းပြန် မောင်းလာတဲ့ ဆိုင်ကယ်၊ လူသွား ပလက်ဖောင်းပေါ် တက်ရပ်ထားတဲ့ ကား၊ အမှိုက်ပုံး အပြင်ဘက်ကျနေတဲ့ အမှိုက်တွေ၊ အကာအရံ ပိုက်ကွန် လုံလုံလောက်လောက် မရှိတဲ့ ဆောက်လက်စတိုက်။ အို အများကြီး ပါလားဗျ။
“ကဲဒီတော့ ဒီအဖြစ်အပျက်တွေကိုဘယ်သူတွေက ရပ်တန့်စေမှာလဲ။ တားဆီးမှာလဲ။
ဘယ်သူတွေမှာတာဝန်ရှိပါသလဲ” ဆိုတဲ့ မေးခွန်းအတွက် ကျနော့် အမြင်ကတော့ ပြည်သူ့ဝန်ထမ်းတွေနဲ့ ပြည်သူတွေမှာ တာဝန်ရှိပါတယ်။ သန့်ရှင်းတယ်၊ စည်းကမ်းရှိတယ်ဆိုတဲ့ နိုင်ငံတွေမှာ အဲဒါတွေ ဖြစ်ပေါ်လာအောင် တာဝန်ရှိတဲ့ လူတွေက တိတိကျကျ အရေးယူ ဆောင်ရွက်ကြပါတယ်။ တစ်ခုတော့ ရှိသပေါ့၊ လူတွေ လိုက်နာနိုင်တဲ့ စည်းကမ်းမျိုးလည်း ဖြစ်ဖို့ လိုအပ်ပါတယ်။
မန်းလေးသားမို့လို့ လဲ မန်းလေးရဲ့လှပတဲ့ရူ့ခင်းလေးတွေကိုဘဲအမြဲတင်ပေးနေခဲ့တာပါ။
ဒါပေမယ့် မှားနေတာကို မြင်ရဲ့နဲ့မတင်ဘဲထားရင် ………..
ဘယ်သူ့ကိုမှထိခိုက်နစ်နာစေလိုတဲ့ စိတ်မရှိတာတော့ အမှန်ပါဘဲ။
နိုင်ငံကောင်းဘို့ စည်းကမ်းရှိဘို့ကတော့ ကျနော်အပါအ၀င်နိုင်ငံသားတိုင်းမှာတာဝန်ရှိတယ်လို့ ခံယူပါတယ်။
ရှိတယ်ဆရာရေ ။ အခု NGO ကလေးတွေ မ​န္တလေးတောင်တက်လမ်းတစ်လျှောက် အမှိုက်ကောက်တာတို့ ဘာတို့ လုပ်နေကြပါတယ်။
အမှိုက်ကောက်တာနဲ့တော့ ကွိုင် မတက်ပါဘူးကွယ်။
အခုအနေအထားမျိုးမှာ ကောင်းသောရည်ရွယ်ချက်နဲ့သာလုပ်မယ်ဆိုရင် အာဏာပိုင်အဖွဲ့အစည်းတွေကလဲ
ကျောင်းသားဘဝမှာကျနော်တို့တက္ကသိုလ်ရဲ့အင်္ဂလိပ်စာဌာနမှူးကဆရာL.Jကံကြီးပါ(သူအမကရန်ကုန်တက္ကသိုလ်ကအင်္ဂလိပ်စာပရော်ဖက်ဆာဆရာမကြီး　E.J ကံကြီးပေါ့နော်)
(ကွယ်လွန်သွားပြီဖြစ်သောကျေးဇူးရှင်ဆရာ L.J ကံကြီးအားဦးခိုက်လျှက်)
လူကြီးက ကားထဲဆေးလိပ်သောက်ပြီး.. ဆေးလိပ်ပြာခွက်ကို လမ်းပေါ်မီးပွိုင့်ရပ်တုံး.. သွန်ချတဲ့အခါ.. ကျောင်းသားလေးအရွယ်က.. “လမ်းမဟာမင်းရဲ့အမှိုက်ပုံမဟုတ်ဖူး”လို့အော်ပြောတာ..
ဒါမျိုးကြော်ငြာတွေကို.. ဘာသာရေးအဖွဲ့တွေ..နန်းပရောဖစ်အဖွဲ့တွေ.. ဆိုင်ရာမြို့နယ်ဒေသအာဏာပိုင်တွေ..လုပ်ကြတယ်..။
ပြဿနာမတက်စေချင်ရင်.. ဆိုင်ရာလွှတ်တော်အမတ်ကို သွားပြောထားပေါ့..။
မန္တလေးက..ဘုန်းကြီးအိုတပါးက.. ..ဆွမ်းခံကြွလာရင်း..သပိတ်လေးချ.. လျှံကျနေတဲ့အမှိုက်တွေကို.. တုန်ချိချိနဲ့..အမှိုက်ပုံးထဲလိုက်ပြန်ကောက်ထည့်နေတာကို.. တီဗီ..ဓါတ်ပုံရိုက်.. အသံလေးပါထည့်လိုက်ပေါ့.. “တကာတို့..ကိုယ့်အမှိုက်တွေကို.. ပုံးထဲတော့ သေချာထည့်ကြပါကွယ်..။ လူတွေကို ငရဲမပေးပါနဲ့.. ကိုယ်တိုင်လည်း မယူပါနဲ့”
သဂျီးရယ် ကိုယ့်ရွာထဲက အမှိုက်ပဲ အရင်ကျုံးစမ်းပါအုံး..။
သူကြီးက ကြော်ငြာလက်ခံမယ်ဆိုရင် ကြုံတဲ့အခါ ရိုက်ထားပေးပါမယ်လေ။